Professional Industrial Laser Chiller, Mvura Chiller Goodcturing |S&A Chiller
Precise tembiricha kudzora kweLaser masisitimu uye maindasitiri ekushandisa kubvira 2002
UltrAffess Laser & UV Laser Chiller
Maindasitiri process chiller
Mvura yakatonhorera chiller
Industrial Laser inotonhorera uye tembiricha kutonga
Makore makumi maviri anowana kutonhora zvakanaka
S&A Chiller chakagoverwa muna 2002 aine makore makumi maviri emakore ekugadzira chiller chiitiko, uye zvino anozivikanwa sepiyona anotonhorera tekinoroji uye akavimbika mukwanyina muLaser indasitiri. S&A Chiller chinopa zvavanovimbisa - kupa zvakanyanya kushanda kwakakura, kwakavimbika kwakanyanya uye kune simba maindasitiri emvura yeindasitiri ane hunhu hwakanaka.
Kuverengera kwedu kwemvura huya kwakanakira dzakasiyana-siyana maindasitiri ekushandisa. Uye for laser application kunyanya, tinokudziridza mutsara wakakwana weLaser mvura chiller
Tave tiri kubatsira vatengi munyika dzinodarika makumi mashanu kugadzirisa matambudziko ekunetseka mumishini yavo pamwe nekuzvipira kwedu kugadzikana kwechigadzirwa, kuenderera kwechiitiko uye kunzwisisa kwevatengi zvinoda ......
S&A Chiller chinopa zvavanovimbisa - kupa zvakanyanya kushanda kwakakura, kwakavimbika kwakanyanya uye kune simba maindasitiri emvura yeindasitiri ane hunhu hwakanaka.
Industrial Chiller System CW-6000 3KW inotonhorera kugona 5 kusvika 35 ° C tembiricha kudzora huwandu
Rack Mount Chiller RMFL-1000 kuti 1000W Handheld Laser Welding Machine
Water dzaserera Chiller CW-6210 Akanyarara Operation ± 0.5 ° C nemazvo Cooling
Industrial Chiller CW-5000 yeCo2 Glass Laser Tube
Inotakurika mvura chiller cwup-20 yeiyo Ultrafhf FASER uye UV LASER ± 0.1 ℃ Kugadzikana RS485 Kukurukurirana
Capacity Large Industrial Refrigeration Unit CWFL-12000 nokuda 12KW Fiber Laser
Kuti uve mutungamiri weGlobal Industrial firiji
Isu tinoita zvinopfuura kungotengesa chigadzirwa
Isu tinopa 24/7 Mutengi Rutsigiro uye tarisiro yezvinhu zvese zvemutengi zvakananga nekupa zano rekuchengetedza basa rekugadzirisa, basa rekushanda uye zano rekupfura kana kusashanda zvinoitika. Uye kune vatengi veimba yekutandarira, vanogona kutarisira kuti sevhisi yemunharaunda muRussia, UK, Poland, Mexico, Australia, Singapore, India, Korea naTaiwan.
Zvese S&A Chiller isu tinopa vatengi vedu takazara mune zvekushandisa mune zvekushandisa izvo zvinogona kuchengetedza chiller kubva pakunyorova uye guruva rekufambisa kwenguva refu kuitira kuti igare munzvimbo yakakwana uye ichisvika kunzvimbo yevatengi.
S&A Chiller chakagoverwa muna 2002 aine makore makumi maviri emakore ekugadzira chiller chiitiko, uye zvino anozivikanwa sepiyona anotonhorera tekinoroji uye akavimbika mukwanyina muLaser indasitiri.
Kubva 2002, S&A Chiller yave ichitsaurirwa kuindasitiri kuyora chiller uye kushumira akasiyana-siyana maindasitiri, kunyanya indasitiri laser. Kuziva kwedu mukunyatso kutonhora kunoita kuti tizive zvaunoda uye dambudziko ripi rinotonhorera. Kubva ± 1 ℃ to ± 11.1
Kuti tigadzire iyo yakanakisa mhando yemhando yemvura, takasvitswa& condenser inova zvikamu zvakakosha zvemvura chiller. Kugadziriswa kwegore negore zvino kunosvikira zviuru zana negore + pagore.
Rudzius mhando yekudzora
Hunhu hwakatarisana nacho hwekutanga uye hunoenda mumugodhi ese ekugadzira, kubva pakutenga kwezvinhu zvisina kugadzirwa kusvika pakutumira kwechibereko. Imwe neimwe yechiller yedu inoedzwa muBaratory iri pasi pemamiriro ekutakura uye inoenderana naCe, midzi uye kusvika pamazita nemakore maviri eWarranty.
Isu tinogara tichiripo kwauri
Chikwata chedu chehunyanzvi chinogara chiri pabasa rako chero chipi chaunoda neruzivo kana nyanzvi rubatsiro pamusoro pemaindasitiri chiller. Isu takatogadzira mapoinzi ebasa muRussia, UK, Poland, Mexico, Australia, Singapore, India, Korea naTaiwan kuti vakupe mukana wekukurumidza kune vatengi veimba yekutandarira.
S&A Chiller inoita zvimwe zvigadzirwa zvakanaka, mashandisirwo makuru ekutonhora pasi lasers kana kunyangwe akasiyana mashandisirwo okuramba achiwedzera kufukidza CPU's pamhepo yakaderera temps.
- neU.S. Mutengi
NdashandisaS&A Machira ezviviri zveangu laser engraver zvirongwa uye vari kuita basa rakakura. Uye mibvunzo yangu ichipindurwa nekukurumidza.
- nemutengi weAustralia
Ingosiya email yako kana nhamba yefoni pane fomu yekuonana kuitira kuti tikwanise kukupa mamwe mabasa!
Copyright © 2021 S&A Chiller - Kodzero dzese dzakachengetedzwa.